ICRC Iyo SRCS Oo u Gurmaday Dad Ka Barakacay Dagaallada Gaalkacyo – Goobjoog News
War-saxaafaddeed kasoo baxay ICRC Iyo SRCS ayaa lagu sheegey iney u gurmadeen 60 kun oo qof, kuwaasi oo dhowaan ka barakacay dagaallada ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Wasar-saxaafedeedkan oo nuqul kamid ah soo gaarey Goobjoog News, ayaa lagu sheegay in dadkaasi loo gurmaday la siiyey raashiin, adeeg caafimaad iyo biyo.
War-saxaafadeedka ayaaa sidan u qoran:
Nayroobi(ICRC) – Ka dib iskudhacyadii cuslaa oo ka dhex qarxay xoogag hubeysan oo ka kala tirsan Galmudug iyo Puntland oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa Guddiga Caalamiga Laanqeyrta Cas (ICRC) iyo Ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed (SRCS) dad gaaraya ilaa 60,000 barakacayaal u qeybiyeen bariis, digir iyo saliida wax lagu karsado.
Qaar ka mid ah dadkaas oo gaaraya 34,000 ahna kuwa qabaan baahiyaha ugu weyn waxaa la siiyey maryo kaneeco, baco, maacuun, baaf, jeerigaano iyo xirmooyin ku jiraanalaabta fayo-dhowrka. Hawshaas waa jawaabta deg degga ugu weyn ICRCsanadkan ka bixiso dalka. Gargaarka cuntada ayaa la filaaya inuu gaaromuddohalbiliyadoojirtorajoah in xaaladda ay degto.
Intaa waxaa dheer, waxaa la sameeyey meelo biyaha laga dhaansado oo ku meelgaar ah iyo biyo- dhaamin.Kooxda caafimaadka wareegta Ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed waxay qoysaskabarakacayaasha ufidiyeenadeegyada caafimaadka.
Durbadiiba isku dhaca ka dib, sahay caafimaad ayaa la gaarsiiyey isbitaalka oo qaabilay laba dersin dad ah oo ku dhaawacmay dagaalka.
ICRC waxay la hadashay qeybaha ku lugta leh colaada in ay ka wadahadlaan fududeynta gargaarka bani’aadamnimo.
Iskudhacyada cuslaa oo bishan Oktoobar 7-deedka qarxay qeybta waqooyi ee dalka waxaa ku dhintay 11 qof daraasiina way ku dhaawacmeen.
Qiyaasaha qiimeynta ICRC waxay sheegeysa in ka badan boqolkiiba 90 dadka reer Gaalkacyo in ay u barakaceen tuulooyinka u dhow ama u dhaqaaqeen duleedka magaalada, Inta ay socoto xiisadda labada dhinac barakacuna wuu siisoconaaya.
Barakaca baahsan wuxuu imaanaya keliya sanadka dib markii rabshado ka qarxeen isladegaankan bishii Disembar 2015-kii oo ku dhinteen 21 qof, 70,000 qofna ku qasbay inay qaxaan.
Jawaabcelinta deg degga bani’aadamnimo ee ICRC sanadkan 2016 waxaa ka mid ah sahay caafimaad oo la siiyey 18 isbitaal iyo bukaan-socod eegto laguna daweeyey dhaawac 4,000 qof, waxaa cunto halbil ah la siiyey 161,000 qof, alaabta guriga 90,000 qof, 82,000 qof waxaa la siiyey sahay biyo degdeg ah.
Vpnino cicwse Buy cialis cheap cialis canadian pharmacy
Qrbuno vdzcve Viagra brand cialis 20mg
Tzrnar cpxcec ed meds best place to buy cialis online reviews
Xdfvwq relggk generic viagra canadian
https://viapll.com/ best viagra alternative
https://tadaldos.com/ us cialis
buy cialis online no prescription cialis pro
canadian pharmacy online cialis buy cialis 5mg
Ikqgfh cmobva tadalafil generic otc Asdli
Bnuwhy dcfmll cialis 20mg Cmedw
Gxowle nfcbql buy suprax online Njwgi
Oyrmze oexurw buy cialis 20mg online uk Aybjg
Trcgbq uebmbc Cialis overnight delivery Ldtsm
mexican pharmacy impotence best canadian pharmacy
Jwhibo rrargg buy viagra kansas Ztmmc
Dczwsa xlsalk buy tadalafil cialis Nrikk
indian pharmacy online drugs from canada cheapest pharmacy
erectile dysfunction drug canadian pharmacy best drugstore primer
buy viagra super force viagra from uk addicted to viagra [url=http://llviabest.com/]viagra online 365[/url] ’
geneic viagra viagra vs cialis which is better viagra gum [url=http://acialaarx.com/]can i order viagra online without prescription[/url] ’
where do you inject liquid cialis use cialis promise coupon orlando fl mastercard cialis [url=http://mycialedst.com/]buy cialis online[/url] ’
viagra patent expiration date lloyds pharmacy in scotland order viagra where can i find viagra in london [url=http://genqpviag.com/]buy viagra online\_'[/url] ’
natural food substitute to viagra viagra for sale without prescription and next day delivery viagra without prescription in australia [url=http://genericrxxx.com/]buy viagra cheap..[/url] ’
overnight cialisis on line cialis onlilne generic cialis pills us online pharmacy [url=http://cialijomen.com/]cialis with dapoxetine[/url] ’
cialis online no prescription australia cialis pill canada cialis replacement [url=http://cialmenshoprx.com/]buy generic cialis online[/url] ’
walmart cialis shoppers drug mart canada cialis priligy online australia [url=https://xz-pharmacyonline.com]Dulcolax[/url] ’
generic viagra (tadalafil) 20mg 20mg viagra buy viagra from canadian pharmacy [url=http://erectilejyzd.com/index.php?called=terms]generic viagra without prescription[/url] ’
cialis no prescription pharmacy prescription which is better cialis or levitra [url=https://impotencecdny.com/]Combivir[/url] ’
lowest price generic viagra Feldene what is viagra black 800mg [url=http://erectilejyzd.com/]canada pharmaceuticals online generic[/url] ’
dapoxetine and cialis buy cialis online in australia cialis capsules canada [url=https://impotencecdny.com/info/history.php]cialis generico[/url] ’
canadian viagra prescription cheap canadian pharmacy viagra viagra cost in us [url=http://canadianpharmacy-yy.com/Fitness/how-to-get-a-six-pack.html]order viagra online without a prescription[/url] ’
cialis canada purchase cialis american express cialis sales canadian
mail order pharmacy reputable canadian mail order pharmacies online discount pharmacy
legitimate online pharmacies price prescription drugs prescription prices comparison
pharmacy canada pharmacy prices canadian drug store
how much does viagra cost in canada viagra alternative australia buy real viagra on line without prescription
100 acceptance payday loans no fees cash advance places in franklin tn canada payday loan regulations
song in cialis commercial 2011 echte cialis bestellen what is cialis 20 mg used for
hard money residential loans florida payday loans in hartford ct cash advance in holland mi
blak cialis cialis not working generic cialis 20 mg
buy an essay online – http://payxessays.com/ cheap research papers for sale
affordable essays – http://payxessays.com/ cheap paper writing
college essay service – help writing a research paper thesis website
Maxamuud Cabbas: Kama Ogalaaneyno Dowlad In Ay Safaaraddeeda U Soo Rarto Qudus Iyada Oo Aan Xal Laga Gaarin
brand cialis online pharmacy fastest delivery of cialis gene...